Boggga – Noocyada Toonta ee Atlas | abuurka toonta ee iibka
Noocyada Toonta ee Atlas
Ujeedada websaytkan waa in la isku keena macluumaadka dhammaystiran oo ku saabsan kumanaanka kun kala duwan ee toonta dunidda oo dhan, iyo si loo dhiso hawsha sare ee toonta ee leh tayada sare ee lagu kalsoonaan karo qeybiyeyaasha labada beeritaanka iyo cunidda.
Mashruuca la Wadaag nooc toontaada!
Ma beerataa gobolka ama nooca dhexalka toonta? Noo soo dir sawir iyo macluumaad ku saabsan. Waxaan ku farxi doonaa in aan ku darno noocyada kala duwan ee toonta Atlas.
Waxaan ku farxi doonaa haddii aad na siin karto dhowr dhega yare, toon, bulbils Abuurka iyo Bangiiga Beerida. Waan kobcin doonaa kaddibna waxaan la wadaagi doonaa beeralayda dunida kale.
Copyright © 2015–2019 Noocyada Toonta ee Atlas Liiska noocyada toonta Kala duwan
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 08. Diseembar 2018